Sunday July 07, 2019 - 19:04:31 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Magaalada Davos oo ah xarunta shirarka dhaqaalaha adduunka kuna taal gobolka Graubunden oo ka mid ah gobollada ugu waawaynd dalka Switzerland ee bartamaha qaaradda Yurub waxaa lagu qabtay muxaadiro diini ah ooy ka soo qaybgaleen dadka Muslimiinta ah
Muxaadiradan qiimiga leh oo ay soo jeedinayeen culimo ducaad caano ka timid UK sida Shiikh Abuukar Maxamed iyo Shiikh Cumar Maxamed Faaruuq ayaa waxaa soo agaasimay jaaliyadda Davos hoggaanka u hayo Mudane Mowliid Xaaji Maxamuud.
Sido kale, muxaadiradan waxaa xaadir ku ahayd gudoonka jaaliyadda Graubunden fadhigeedu yahay Chur Marwo Ilhaan Maxamed Aadan, waxaana muxaadiradan ooy caruuro iyo waalidiin dad u badan khayrka dhagaysanayay waxaa abaabulkeeda aad uga dhex muuqanayay Mudane Mowliid Xaaji Maxamuud iyo Proff Saalax Shiikh Cusmaan, Mudane C/LLe Saleebaan Maxamed, Mudane Ciise Yuusuf Shiikh (Ciise Davos) iyo Mudane C/Raxmaan Karaasiiddo oo ka mid ah masuuliyinta Soomaalida gobolka.
Muxaadiradan intii ay socotay waxaa qibraddiisi taariikh nololeedka dalkani ka sheekeeyay Macalin Caamir Maxamed oo ka mid ah macalimiinta caruurta muslimka diinta Islaamka u dhiga, kaaso isago yari yimid waddanka Switzerland, iyado kaalintiisuna uusan gaban Macalin Axmed Shiishiile oo ka mid ah isna barayaasha macalimiinta caruurta muslimka gaar ahaan Soomaalida Quraanka Kariimka iyo tarbiyada aad ugu dadaala in badana xaraf Quraan u jiiday ardayda gobollada bariga Switzerland.
Warbaahinta ku bohowda Koonfurta Soomaaliya marna aad u taqaanaan Southern Media Co-Operation kol ay lugta dhigtay goobta muxaadirada casuumad rasmi ah dabadeed, waxaa ay indhaheedu qabanayeen waalidiin qushuuc badani ka muuqanayo iyo caruur shacaacirtii Islaamka iyo dhaqankii Suubanaa Soomaalinimadu ay ka muuqanayso, kuwaaso aad u dhagaysanayay muxaadirada ducaadda martidi ay u soo jeedinayeen si isdabajoog ah.
Khayekan waxaa fadhiga bulshada lagu dhex arkayay gudoomiye xugeenkii arrimaha bulshada gobolka Baay ahaana taliyaihii hore ee nabadsugidda degmada Buurhaba Mudane Feysal C/Qaadir Xasan (Feysal Digir) Jamhuuriyadda barakaysan ee Maayland isna si lama filaan ah kamaraddu ay qabanaysay.
Guud ahaan gobolka Graubunden oo ah gobolka ugu wayn dalka Switzerland ayaa daggan Soomaali aad u tira yar, balse waxaa tayadoodu ay ka fiicantahay inta badan Soomaalida gobollada kale ee waddanka Swisska kolka loo fiirsho ka fogaashiyaha qabyaaladda iyo kala daadsanaanta, waxaana ay muxaadiradan aakhirkii ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan gaws u raaxayn dabadii.
Rabbigaana caabud inta ay yiqiintu kaaga imasnayso amar Alle laakiin!!